Abalinganiswa boNcwadi boMhla: Luis Cernuda kunye noSam Shepard | Uncwadi lwangoku
A kuqala, ULuis Cernuda kunye noSam ShepardAbanayo into efanayo, kodwa kuphela, i-priori. Ukongeza uthando lwabo oluqhelekileyo loncwadi, bamanyene ngenani, 5. Ngokukodwa namhlanje, nge-5 kaNovemba. Ngale mini, omnye wazalwa kwaye omnye wasweleka, ewe, iminyaka yahlukene ngokwahlukeneyo. Ngale mini njenganamhlanje uSevillian Luis Cernuda wasweleka kwisiXeko saseMexico ngo-1963. USam Shepard wazalwa nge-5 kaNovemba ngo-1943 e-Illionois, e-United States.
Okulandelayo, siveza kancinci nganye nganye, ngendlela yethu kwaye njengenqaku elikhethekileyo langoMgqibelo.
1.1 Amabinzana kunye neendinyana zembongi
2 USam Shepard
2.1 Amabinzana alo mbhali oguqukayo
Imbongi yaseSevillian yabhala:
«Imibongo yam ndihlala nomntu endimthandayo. Ndiyazi kakuhle ukuba lo ngumda. Kodwa ukusikelwa umda ngowona mda wamkelekileyo emva kwayo yonke loo nto. Amanye ngamagama asebenzayo kuphela ukuba ayaveza into ebendingakhange ndiyicinge okanye ndingafuni ukuyithetha. Ngamanye amagama, ukungcatsha. Ukuba wohlukene nam, makube kukundingcatsha. Umoya uya kukuphazamisa ngamabali amafutshane. Ndiyakulibala kwa into enye ukuba umthi nomlambo nawo ulibalekile ».
ULuis Cernuda wayengoweqela leembongi ezazisaziwa njenge Isizukulwana se-27. Umfundi ophumelele umthetho kunye nomxhasi weRiphabliki, waya ekuthinjweni emva kweMfazwe yamakhaya eNgilani, eUnited States naseMexico, apho wayeza kufa khona ekugqibeleni.
Kumsebenzi wembongi ukungqubana phakathi "kwenyani nomnqweno" yinto eqhubekayo, enyanisweni, yonke imisebenzi yakhe yemibongo ukusukela ngo-1936 yaqokelelwa phantsi kwesihloko esinye: "Inyaniso nomnqweno".
Olu luvo lwenkondlo lunokwahlulwa lube ngamanqanaba amabini, ngakumbi lawo ahambelana ngaphambili nasemva kwemfazwe. Eyokuqala ibonisa inguquko eyona mibongo isulungekileyo («Iprofayile yomoya», 1927) ukuya ku Impembelelo kwi-surreal ("Iziyolo ezingavumelekanga"Ngo-1931). Kukwesi sigaba apho sifumana umsebenzi wakhe odumileyo "Apho kulibala khona" (Ngo-1932-1933). Emva kwemfazwe, umxholo wesizwe uyaqatshelwa kwiivesi zakhe kwaye ukuncothula neengcambu ukuya kwilizwe azalelwa kulo. Kancinci kancinci umsebenzi wakhe ugqitha ezinye amanqanaba okulinganisa kunye nefilosofi.
U-Luis Cernuda ubhale rhoqo kwi Ukuphazamiseka kothando, ukuyibona njengengafikelelekiyo kwaye "ingavumelekanga" ebusweni boluntu. Iindinyana zakhe zikwabonwa kwiimvakalelo zokuziva ulilolo, ukungabikho kwenkululeko kunye nokuhamba kwexesha. Ngenxa yoko ivesi yakhe eyaziwayo: "Bebuhle kanjani ubomi kwaye bungenamsebenzi."
Amabinzana kunye neendinyana zembongi
"Sazi kuphela indlela yokucela ingqele njengabantwana ngenxa yokoyika ukuhamba wedwa kwisithunzi sexesha."
«Ucacisa ubukho bam: ukuba andikwazi, andiphili; ukuba ndiyafa ndingakwazi, andifi ngenxa yokuba andiphilanga ».
Inkululeko andazi nto ngaphandle kwenkululeko yokuvalelwa entolongweni endingenakuva igama lakhe ndingangcangcazeli.
«Umntu endimlibalayo lo bomi buncinci, nobusuku nemini ngabo nantoni na endiyifunayo, kwaye umzimba wam nomoya wam udada emzimbeni wakhe nomoya wakhe njengeziqobo ezilahlekileyo ezikhukuliswe lulwandle okanye zikhululwe ngokukhululekileyo, ngenkululeko uthando, inkululeko endiphakamisayo, inkululeko yodwa kuba ndiyafa.
«Eminye imizimba ifana neentyatyambo, eminye ifana nemikhonto, eminye ifana neeribhoni zamanzi; kodwa konke, kungekudala okanye kamva, kuya kuba kukutsha okuwandisa komnye umzimba, ukujika ilitye libe yindoda ngenxa yomlilo.
USam Shepard (oneminyaka engama-72 ubudala) uthathelwa ingqalelo Enye yezona zinto zibalulekileyo zibalulekileyo eMelika. Imisebenzi yakhe yokuqala yazalwa kwii-60s, kwaye ukongeza kwindawo yokubonela ubhale imibhalo yefilimu, ngumdlali weqonga kunye nemvumi. Ezimbini zeefilimu zakhe ezaziwayo zezi "Ingxelo yePelican" y "Ukhethelwe uzuko".
Ngaba yeyokwenyani ilungu leAmerican Academy of Arts kunye neeleta kwaye njengomahluko obekekileyo awufumeneyo zezi I-Theater Pulitzer ngo-1979 yomsebenzi wakhe "Wangcwatywa umntwana" ("Bored Kid") kunye neGuggenheim Fsoci.
Unobudlelwane obuhle kunye neBhaso likaNobel lakutshanje kuLwazi, Bob Dylan asebenze naye kwifilimu "URenaldo kunye noClara" Kwaye kunye nalowo wabhala ingoma ethi "Brownsville Girl", enye yeengoma eziphambili zikaDylan.
Umdlalo wakhe wokugqibela obhaliweyo ubekhona "Kubanda ngoJulayi" (2014).
USam Shepard noBob Dylan
Amabinzana alo mbhali oguqukayo
Ngokuqinisekileyo ngumbuzo ongafanelekanga, awucingi? Buza umntu ukuba kutheni engonwabanga?
Amahashe anjengabantu. Kuya kufuneka bayazi imida yabo. Nje ukuba bakufumanise bonwabile ngokutyisa amadlelo.
"Indawo yam yokusabela yokugqibela, iincwadi zam, zizinto ezilula njengokufumana amatswele asendle ecaleni kwendlela okanye uthando olubuyiswayo."
"Inqaku kukuba umfazi wam uzintywilisa iipilisi kwaye ndiyasela, sisivumelwano ekuvunyelwene ngaso, igatya lesivumelwano somtshato wethu."
Idemokhrasi yinto ethe-ethe kakhulu. Kuya kufuneka ukhathalele inkululeko. Ngokukhawuleza xa uyeka ukuphendula kuyo kwaye uyiyeke ibe ngamaqhinga othusayo, ayisiyontando yesininzi kwakhona, akunjalo? Yenye into. Isenokuba yintshi kude nobuzwilakhe. '
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Abalinganiswa boNcwadi boSuku: Luis Cernuda kunye noSam Shepard
UValentina Ortiz Urbina sitsho
Ndiyayithanda kakhulu imisebenzi yabo banobuganga bokugxeka inkqubo abahlala kuyo; okanye uvakalise amaphupha akhathazwe lilishwa; ukuba akukho ndlela yimbi banokuyenza ngaphandle kokuchaza iintlungu, ukungabi nathemba kunye nokugwetywa. Nangona kunjalo, kuyandikhathaza ukuba bafumane kuncwadi, iindlela zokubonisa amaphupha abo okubangela iintlungu, kulonwabo lokuziva ukhulu.
Phendula uValentina Ortiz Urbina
Uxolo andivumelani nento oyithethayo ukuba bayayenza "kulonwabo lokuziva ndikhulile" ... Ubuncinci hayi kuLuis Cernuda.
Andivumelani noko kuthethwa nguValentina. Abafuni kubangela iintlungu, kodwa bazibonakalise ezabo, bazidlulise ngegama elibhaliweyo. Kwaye abanye bafuna ukuziva bonwabile kwaye befuna uzuko loncwadi. Kodwa abanye ngokuqinisekileyo akunjalo.
Enkosi ngenqaku lakho, inomdla kakhulu. Ndifunde ngemicimbi ethile ebendingayazi Hayi indlela amnandi ngayo amabinzana kaLuis Cernuda. Ubume bakhe njengembongi bubonakala ngokucacileyo kubo. Enye yezona zinto zibuhlungu ezinokwenzeka kuwe kufuneka uzigxothe ngokwakho.
Ukubamba uncwadi u-Oviedo.
U-Luis Cernuda wajoyinwa ngamashwa aliqela: ukuthunjwa, ukuthatha imeko yakhe yesondo ayifihle kuba wayengathathelwa ngqalelo okanye egwetywa ngenxa yayo, engakwazi ukuveza ngokukhululekileyo iinjongo zakhe zezopolitiko ngenxa yokoyika impindezelo, njl. Andiphili ubomi obonwabisayo ...
Enkosi ngengcaciso yakho! Ihagi! 🙂
Ewe kuyinyani. Wayenemigangatho emininzi evulekileyo ebomini bakhe. Ewe kunjalo, liliphi ithamsanqa indoda elihlwempu ebinalo njengabantu abaninzi, ebalaseleyo okanye hayi, kuyo yonke imbali. Andazi ukuba kutheni le nto yokungahloniphi ezopolitiko okanye ezenkolo okanye imeko yezesondo yabanye. Njengokuba kunyanzelekile ukuba benze okanye bacinge ngokufanayo xa bengekho.
Bendingazi ukuba akazange aphile ubomi obonwabisayo, kodwa andothuki emva kokufunda ingxelo yakho.
Enkosi kuwe kwakhona.
Ndisandula ukufunda umbongo kaLuis Cernuda onesihloko esithi "Ukuba umntu angatsho" apho ufumana khona izivakalisi zakho. Kwafika kum nge-imeyile xa ndandirhuma kwiwebhusayithi yokubhala. Yinto ehambelana njani ukuba ikwangumbongo omnye kwaye ingeyiyo enye.
Uxolo uCarmen, kodwa lowo uhamba noShepard efotweni akanguye uDylan, kodwa ngumhlobo wakhe uJohnny Dark. Konke okugqibelele!